जसपामा काउन्टर स्पष्टीकरणः महन्थ पक्षलाई प्रश्न- पार्टी किन आफ्नो पकेट बनाएको ? - Sidha News
जसपामा काउन्टर स्पष्टीकरणः महन्थ पक्षलाई प्रश्न- पार्टी किन आफ्नो पकेट बनाएको ?
जनता समाजवादी पार्टीमा एकले अर्को पक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने क्रम बढेसँगै पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन हुन लागेको छ । अध्यथ महन्थ ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेकै मितिमा उपेन्द्र पक्षले पनि काउन्टर स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रकाश अधिकारीको तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्णलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई किन साथ दिएको ? भनिएको छ ।
त्यस्तै पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएको र गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप गरेको,छुट्टै कार्यालय सञ्चालन गरेको तथा राष्ट्रपति कार्यालय,निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयमा पार्टीको तर्फबाट पत्रहरु पठाउने कार्य किन गरेको ? जस्ता प्रश्न सोधिएको छ ।
९ बुँदै स्पष्टीकरणमा पार्टीको आधिकारिक निर्णयविना सरकारसँग वार्ता गर्न भनी लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई वार्ता कार्यदलमा पठाइएको पनि आपत्ति जनाइएको छ ।
विधानमा नभएको व्यवस्थालाई स्वेच्छारी ढंगले पार्टीलाई आफ्नो पकेट बनाउने कार्य किन गरेको भनेर ठाकुरलाई सोधिएको छ । तीन दिनभित्र स्प्ष्टीकरण चित्त बुझ्दो नदिएमा अनुशासनको कारवाही गर्ने चेतावनी समेत उपेन्द्र पक्षले दिएको छ ।